အတိတ်က မဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးသူ Blackpink's Jennie
အတိတ်က မဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးသူ Blackpink’s Jennie
BLACKPINK အဖွဲ့နဲ့အတူ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Jennie ကတော့ အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦးထဲမှာ Trainee သက်တမ်းအကြာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက နယူးဇီလန်ကနေ ကိုရီးယားကို ပြန်လာခဲ့ပြီး YG မှာ လူရွေးပွဲဝင်ဖြေရင်း Trainee အဖြစ် တန်းပြီး အရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။
Netflix documentary ဖြစ်တဲ့ Blackpink: Light Up the Sky ထဲမှာတော့ Jennie ဟာ သူမရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းပြန်ပြောရင်း မဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ဝမ်းနည်းခဲ့ကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲဦးမထွက်နိုင်ခင် ၆ နှစ်လုံးလုံး Trainee အဖြစ် လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ Jennie ဟာ “ကျွန်မဟာ trainee တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့လို့ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအတွက် မနှမြောသလို၊ နောင်တလည်းမရပါဘူး။
ဘယ်လို ကရမလဲ? ဘယ်လိုသီချင်းဆိုရမလဲ? ဆိုတာ သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကြောင့်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝမ်းနည်းပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၁၈/ ၁၉ လောက်အထိ မိသားစုနဲ့အတူ အိမ်မှာပဲ ဖြတ်သန်းနေခဲ့သင့်တယ်။ လူတိုင်းလောက်က သူတို့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိကြတယ်လေ။
ကျွန်မအတွက် အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝ အမှတ်တရဆိုတာမျိုးက ဘယ်တော့မှ ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Jennie ဟာ အဆိုတော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ကြောင့်ပဲ ကျောင်းသူဘဝကိုစွန့်လွှတ်ကာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်သမျှမှာပဲ အချိန်ကုန်ခံရင်း လေ့လာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျောင်းတက်စဉ်အမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်မရနိုင်တော့တာကြောင့် Jennie လေးက သူမရဲ့ငယ်ဘဝအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးရှာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ကျကျနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ Jennie ကတော့ လူငယ်တွေရဲ့စံပြ idol တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
Previous post မိန်းကလေးတွေ များစွာ မနာလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Zhang Yixing ရဲ့ အသားအရေလှပမှု
Next post နိုင်ငံများစွာရဲ့ Christmas နေ့ကို နူးညံ့ညင်သာတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ လွှမ်းမိုးထားနေတဲ့ V